Isibuyekezo seMoto 360 | Izindaba zamagajethi
Sivivinye sahlaziya iMotorola Moto 360
AmaVillamandos | | Gadgets, SmartWatch
Ngesonto eledlule sithole ithuba lokuhlola i- ngesithuthuthu 360 by SGIYA ngoMASKANDI MEDIA, mhlawumbe i-smartwatch esifunwa kakhulu emakethe futhi enedizayini enhle kakhulu. Ngaphambi kokuthi siqale lokhu kuhlaziywa futhi ngikutshele nami umbono wami ngalokhu okugqokekayo, ngicabanga ukuthi kulungile ukuthi ngikutshele ukuthi ngokujwayelekile iyi-smartwatch engangiyithanda kakhulu ngokwakhiwa, kodwa ukuthi ingidumaze kakhulu kusoftware. Ibhethri yinto esizoyibeka eceleni okwamanje, ngoba izoba nesikhala sayo ngaphakathi kwalesi sihloko.
Idizayini yale Moto 360 njengoba ngishilo iyamangalisa futhi impela ingenye yezinto ezihamba phambili emakethe. Ngaphezu kwalokho, leli washi le-Motorola lingelinye lokuqala elashiya imidwebo emibi eyayinalezi zinhlobo zamadivayisi. Uma kuqhathaniswa ne-Samsung Gear Neo 2 yami singasho ukuthi ifana nezulu nomhlaba.
Nge Ukudayela kwensimbi okunesibonisi esikhulu, Kuhlanganiswe nomucu owenziwe ngesikhumba futhi ongaba mnyama noma mpunga kusinikeza umuzwa omuhle wokugqoka iwashi elijwayelekile esihlakaleni.
Kuyamangaza kakhulu lapho ubona lokho isikrini asizungezi ngokuphelele futhi ukuthi ezansi sizovela sisikiwe Yilapho kutholakala khona inzwa yokukhanyisa, ebalulekile ekusebenzeni okulungile kwewashi.
I-Las izici eziyinhloko nokucaciswa kwale Moto Moto 360 Yilezi ezilandelayo:
Ubukhulu: 4,6 x 4,6 x 1,1 cm
Isisindo: 50 amagremu
Khombisa: kufaka isikrini esingu-1,56-intshi ngesinqumo samaphikseli angama-320 x 290
Imemori ye-RAM: 512 mb
Isitoreji sangaphakathi: 4 GB
Ibhethri: 320 mAh, yize iqiniso likhombisile ukuthi yi-300 mAh kuphela
Mayelana nesoftware, le Moto 360 ifake ngaphakathi kwe- I-Androir Wear, enguqulweni yayo engu-2.0, ene-interface ecoceke kakhulu, kepha okufanele uyijwayele ukuze uyiphathe ngokushesha futhi kalula.
1 Ibhethri, indawo emnyama yale Moto 360
2 Ingabe kufanelekile ukuchitha ama-euro angama-249 kwi-Moto 360?
3 Umbono ngokukhululeka
Ibhethri, indawo emnyama yale Moto 360
Ibhethri nakanjani iphuzu lapho wonke amadivayisi walolu hlobo emakethe kufanele athuthuke khona, nokuthi ngokwesibonelo kwi-Motorola smartwatch akukuvumeli ukuthi uyisebenzise usuku lonke. Uma ingagcinwa ixhunywe unomphela ku-smartphone, ibhethri ingahlala isikhathi esingaphezu kosuku.
Uma kunenguqulo yesibili yeMoto 360, kuzodingeka ukuthi ibhethri lithuthuke kakhulu, ukuze libe yithuluzi eliwusizo nelisebenzisekayo kuwo wonke umuntu. Futhi ukuthi ukukhokhisa into yalolu hlobo nsuku zonke, okungenani kimi futhi nakanjani kubantu abaningi kuyinto engacabangeki futhi engazimisele ukudlula kuyo.
Okugqamile kule divayisi ukuthi ukuze uyikhokhise, ine- "dock" evumela ukushaja okungenantambo kwedivayisi futhi yenza izikhathi zokushaja zibe ngokunethezeka.
Ingabe kufanelekile ukuchitha ama-euro angama-249 kwi-Moto 360?
Ngokubona kwami ​​nokuba ngumfana ongawathandi amawashi, noma ukuwabeka esihlakaleni, angicabangi, kepha ake ngichaze.
Ngikholwa ukuthi iMoto 360 ayikunikeli lutho olusha noma ongakwazi ukuba nalo kudivayisi yakho yeselula, okufanele futhi uhlale uyiphethe njalo ukuze iwashi lisebenze ngokugcwele.
Kuyisesekeli esihle esizizwa sihle kakhulu esihlakaleni, kepha ngicabanga ukuthi ama-euro angama-249 angama-euro amaningi, futhi ukuyithenga kungaba yisifiso ngaphezu kwesidingo noma okuthile okungasinikeza izinto ezithokozisayo. Ngaphezu kwalokho, inkinga yempilo yebhethri ephansi kakhulu, ekuphoqa ukuthi ukhokhise okugqokekayo nsuku zonke, kungaba elinye lamaphuzu ayisisekelo angangiholela ekuchitheni idlanzana lama-euro kwi-smartwatch yakwaMotorla.
Kufanele ngivume ukuthi ngemuva kokuba nokuhlola amanye ama-smartwat emakethe, bengilangazelela ukuzama le Moto 360, bese ngihlola ukuthi ngiyayithenga yini. Ngemuva kokusebenzisa amasonto ambalwa nginqume ukuthi okwamanje angizukuthenga noma yini egqokekayo yalolu hlobo, futhi ngeke ngiyenze kuze kube yilapho ibhethri lihlala isikhathi eside njengoba ngishilo ngaphambili angizimisele ukuyikhokhisa yonke izinsuku.
Yebo, ngaphandle kokungabaza le Moto 360 yi-smartwatch engcono engikwazile ukuyizama futhi enomklamo omuhle kakhulu. Njengoba abanye abangane bami abahle kakhulu basho ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, le Moto 360 ineso elilodwa ngakho-ke iyinkosi ezweni lezimpumputhe.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » SmartWatch » Sivivinye sahlaziya iMotorola Moto 360
ukukhohlisa kwe-geek kusho
Into yebhethri ihlobene kakhulu. Imvamisa ihlala izinsuku ezimbili kalula. Uma ngimshaya, yebo, ngolunye usuku, kodwa ngaphandle kokumazi.
Ukuphendula ukukhohlisa kwe-geek
UMiguel Alejandro Gargallo Llamas kusho
Ake sibone, isikrini sinezinzwa zezemvelo nezikhanyayo, into i-LG smartwatch ehluleka ngonya! Ngibonga abakwa-Motorola ngokuba nalokhu ngoba ngichitha amahora amaningi emihlanganweni nasezindaweni zokudlela ezinhle naselangeni ngemihlangano.
Phendula uMiguel Alejandro Gargallo Llamas
Sebenzisa i-Black Friday ku-PlayStation Store
Mayelana: Icebo elihle kakhulu lokwenza ngokwezifiso umsebenzi wakho kuFirefox